ရန်ကုန်မြို့တွင်း မိုက်ကြေးခွဲ ကားပါကင်ကြေး ကောက်ခံမှု မြို့တော်ဝန် ကားပင် မလွတ် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့တွင်း မိုက်ကြေးခွဲ ကားပါကင်ကြေး ကောက်ခံမှု မြို့တော်ဝန် ကားပင် မလွတ်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမြို့နယ်များတွင် မိုက်ကြေးခွဲကားပါကင်ကြေးတောင်း ခြင်းမှာ မြို့တော်ဝန်၏ကားပင်မလွတ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ မူလကားမရပ်ရဆိုသည့်နေရာ၌ ကားရပ်ခြင်းကိုငွေတောင်း ခွင့်မရှိသူများက တောင်းနေသည့်ကိစ္စအား စည်ပင်ကတရားဝင် ကားပါကင်ကြေးအဖြစ် ဝင်ကောက်မည်ဆိုလျှင် သူခိုးလက်မှ သူဝှက်လုသလိုဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကျောက်တံတား မြို့နယ်အမှတ်(၁)မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြာ၏ ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်းမကြီးများနှင့် လူနေထူထပ်သည့် မြို့နယ်များရှိ လမ်းမကြီးများပေါ် တရားမဝင် ကားပါကင်ကြေးကောက်ခံ နေမှုများရှိနေသည့်အတွက် ရန်ကုန်စည်ပင်မှ ကားပါကင်ကြေး ကိုစနစ်တကျ ပြန်ကောက်ယူမည့် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိမေးခွန်းနှင့်စပ် လျဉ်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းဖြေ ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”လက်ရှိလည်း ကားပါကင် ကြေးတွေကို ကောက်နေပါတယ်။သို့သော်လည်း စည်ပင်ကမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာကားပါကင်အတွက် ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ လမ်းကကားသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ ကားနားဖို့မ ဟုတ်ဘူးဆိုထားတဲ့အတွက် အကယ်၍များ ကားပါကင်ကြေးကောက်မယ်ဆိုရင် သူတို့မိုက်ကြေးခွဲပြီး တစ်စီးငါးရာနဲ့ကောက်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကားတောင် မလွတ်မပါဘူး။ အန္တရာယ်ပေး လောက်အောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း၊ ကျွန်တော်တို့အပိုင်းပေါ့။ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ထိထိ ရောက်ရောက် အရေးယူဖို့လိုပါ တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က စည်ပင်ကကားလမ်းမများတွင် ကားပါကင်ကြေးကောက်ခံမှုရှိခဲ့ သော်လည်း အစိုးရသစ်အကူးအ ပြောင်းကြားကာလမှစ၍ ကားပါကင်ကြေးကောက်ခံမှုကိုဖျက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိစည်ပင်က ကားပါကင်ကြေးမကောက် တော့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းခြောက်မြို့ နယ်ရှိလမ်းမကြီးများတွင် တရားမဝင်ကားပါကင်ကြေး ကောက်ခံနေသူများသည် အုပ်စုဖွဲ့ကာ ကားတစ်စီးလျှင် ကျပ်ငါးရာနှုန်းကောက်ခံ နေမှုများရှိနေပြီး ယင်းသည် ဥပ ဒေမဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်နေကြောင်းဒေါ် ကြည်ပြာက ပြောသည်။
”ရန်ကုန်မြို့တွင်းအခြေအ နေက ကားရပ်နားဖို့နေရာ မပေးလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ကားလမ်းဆိုတာ ကားသွားရမှာမှန်ပေမယ့် ကားပါကင်သီးခြားမရှိတဲ့ အခြေ အနေမျိုးမှာ လတ်တလောအနေ နဲ့ခုရှိတဲ့ပြဿနာကို ရေတိုအစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကျ ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ လမ်းသွယ်တွေထဲ ကားပါကင်ကိစ္စကို လတ်တလော မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် လမ်းမကြီးတွေ လမ်းကျယ်ကြီးတို့မှာ ကားပါကင်တစ်နေရာစာ တော့ထိုးထားတယ်။ နှစ်ထပ်ရပ် ထားတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုရှိ နေပြီးသားနေရာမှာပဲ ကားပါကင်ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆွဲပြီး တင်ဒါပေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ကားပါကင်ကိစ္စသည် စနစ်တကျဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ရှေ့က စည်ပင်ရှင်း နောက်ကပြန်လုပ်နေသည့်စည်းကမ်းမဲ့အပိုင်းကို စည်းကမ်းရှိအောင် ရေတိုအရဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကာ ရေရှည်အဖြစ် စည်းကမ်းမရှိဖြစ်ရသည့် အားနည်းချက်ကိုလိုက်ရှာဖြေရှင်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန်က ပြောသည်။
တောင်အာဖရိက သမ္မတ ဇူးမား ရာထူးမှနုတ်ထွက်
တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်း ဝယ်ယူခွင့် ပုံစံများ ရန်ကုန်ရှိ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန လေးခုတ??
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသသို့ အကြီးစားစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရန် အစ္စရေး ပြင်ဆင်နေ
ဆွေးမြည့် ပျက်စီးစ ပြုလာပြီဖြစ်သည့် မဟာစည်းခုံကြီး စေတီတော် အောက်ပစ္စယာ အခြေပိုင်းကို ပြု??
ဆာနေးကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုရန် မန်စီးတီး လုပ်ဆောင်နေ
တောင်ပြုန်းပွဲတော်သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် မန္တလေး-တောင်ပြုန်းလမ်းပိုင်း ရထားခရီးစဉ်ကို ၁၃ခေါက်အထိ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲပေးမည်
မန္တလေး၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ခရီးလမ်းများတစ်လျှောက် Famous Energy စက်သုံး??